June 30 tiang kahdohnak kan ngol than tiah SAC phu nih thanh – Buanchukcho
June 30 tiang kahdohnak kan ngol than tiah SAC phu nih thanh
May 31, 2021 admin RAMLENG THAWNG 0
Tlangcung hriamtlai phu he ramdaihnak kong ceihmaiasi khawh nakhnga June 30 tiang kahdohnak ngol caan cu kan sauh than tiah SAC phu nih May 30 ah an thanh. Runvennak le Ukhruainak lei an hnursuan dah ti lo ahcun ram pumpi huap in kahdohnak kan ngol tiah an thanh. Kahdohnak kan ngol tiah an thanh lengmang ko nain nifatin ti awk in ram pumpi ah kahdohnakaum peng.
အပစ်ရပ်ကာလ တစ်လ သက်တမ်းထပ်တိုးတယ်လို့ စစ်ကောင်စီကြေညာ
■ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေ ဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ အပစ်ရပ်ကာလကို ဇွန်လ ၃၀ ရက်နေ့အထိ တစ်လထပ်တိုးတယ်လို့ အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီဘက်က မေလ ၃၀ ရက် မနေ့က ရက်စွဲနဲ့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တယားကို ပျက်ပြားအောင် နှောက်ယှက် တိုက်ခိုက်ချိန်ကလွဲပြီး ကျန်တဲ့စစ်ဆင်ရေးအားလုံးကို တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ဆက်လက်ရပ်ဆိုင်းသွားမယ်လို့ ပါရှိပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိစ္စတွေ ချောမွေ့အောင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့နဲ့ ဇွန် ၁ ရက်နေ့ မနက်ဖြန်ကစပြီး ၂၀၂၁ – ၂၀၂၂ ပညာသင်နှစ်အတွက် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မယ့် အခြေခံပညာ ကျောင်းတွေမှာ တက်ရောက်မယ့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသားတွေ အေးအေးချမ်းချမ်း ပညာသင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပါရှိပါတယ်။
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လည်း ထပ်မံအပစ်ရပ်ထားတဲ့ကာလအတွင်း အမြဲတမ်း ထိတွေ့ တွေ့ဆုံပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတာတွေလုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
အာဏာသိမ်းပြီးမှ အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီက ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဟာ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အချို့နဲ့ တွေ့ဆုံတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ အပစ်ရပ်စာချုပ်လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၀ ဖွဲ့ရှိပြီး အဲဒီထဲက ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU – KNLA နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာ စစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေသလို အပစ်ရပ်လက်မှတ် မထိုးရသေးတဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ လည်း ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာ နေ့စဉ် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။
#RFA. The Hakha Times
R.I.P : Phakanh Pengkulh Manah Khuabawi Meithal Kah Nakin A Nunnak Aliam
Good News: PDF le KIA an i bawm cang, Ralkap (10) leng An Thah Hna